ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်(၂) Mandalay Gazette Conference | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Best Web Awards » ဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်(၂) Mandalay Gazette Conference
Posted by padonmar on Jan 21, 2013 in Best Web Awards, Creative Writing, My Dear Diary, Myanmar Gazette, News | 31 comments
အခမ်းအနားစဖို့ လူတွေနေရာယူမယ်လို့ပြင်နေတုန်း ခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့ တိုက်ပုံအဖြူဝတ်လို့ ရွှေတိုက်နဲ့ နင်လားငါလား ထွားကျိုင်းတဲ့ အရပ်ပိုင်ရှင် ၀င်လာပါတယ်။
အို ဂဇက်ရွာသူသားတွေကို ဒီလို ရုပ်ဖျက်လာလို့ ဘယ်ရမလဲ။
လူတိုင်းက မိုင်နိမ်းအစ်စ် ဖတ်ထားတဲ့သူတွေပဲ၊
ဆုယူမယ့်သူ ၆ယောက်မှာ တစ်ယောက်လိုနေသေးတော့ ခဏစောင့်နေတုန်း
လိမ့်လိမ့်လိမ့်လိမ့်နဲ့ တောင်ကြီးနှစ်လုံးလို Fatty Cat တို့စုံတွဲ ရောက်လာပါတယ်။
အာဂနဲ့နွယ်ပင် မောင်နှစ်မ(အာဂအပြောပါ)လည်း ကရ၀ိက်ဖက်ကနေ ရောက်လာပါတယ်။
ဘာမှ မပတ်သက်ပါဘူးဆိုတဲ့ အိတုံနဲ့ ဒေါက်တာ AKKO ကတော့ လူရင်းတွေပီပီ အစောကြီးကတည်းက ကြိုဆို နေရာချပေးနေပါတယ်။
အဲဒီအချိန် လူတစ်အုပ်ဝင်လာတာတွေ့တော့ ဘယ်သူတွေများပါလိမ့်လို့ ၀ိုင်းအကဲခတ်ကြပါတယ်။
မောင်ဝါ၀ါ ကတော့ သူ့အဗာတာ ပုံအတိုင်း ပြေတီဦးထက်ချောတဲ့ ရုပ်နဲ့ဆိုတော့ မှတ်မိကြပါတယ်။
ရင်နင့်အောင် ကလည်း ပုံထဲကရုပ်နဲ့ သိပ်မကွာပါဘူး။
သြဂုတ်လ ဆုရှင် ဘကြီးအောင် ဆိုတဲ့ အောင်မိုးသူက နည်းနည်းနောက်ကျမှရောက်ပါတယ်။
ဘောင်းဘီလက်ရှည် ရှူးဖိနပ်နဲ့ စမတ်ကျကျ လာတာကတော့ Water Polo ပါတဲ့။
(ဒေါက်တာ ဆိတ်ဖွားတော့ မဟုတ်ပါဘူးနော်လို့ မေးကြရပါတယ်)
သူနဲ့အတူ ၀င်လာတဲ့ ရှမ်းမလေးလို ဖြူဖြူချောချောလေးက Water Fish ပါ။
ရွှေတိုက်က မီးဖိုနားသိပ်မကပ်နဲ့၊ကြော်လိုက်လိမ့်မယ် လို့ စေတနာ ဗလ၀နဲ့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
သူတို့ကိုတော့ ချောင်လေးထဲ ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်နေတဲ့ easycook ဝေေ၀နဲ့ ဆူးတို့ ၀ိုင်းကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဗွီနိုင်းရဲ့ရှေ့မှာ မိုချို့မောင်လေးနဲ့ ဆုယူရမယ့် ဆုရှင် ၆ ဦးက တစ်ဝိုင်း
ဖတ်ရွေးတွေနဲ့ တောက်တိုမယ်ရ စုံစီနဖာ အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့ M လုလင်၊ဦးပါ၊အဘဖေါ၊အမတ်မင်း ၊အာဂ၊မမနဲ့ ပဒုမ္မာတို့ က တစ်ဝိုင်း နေရာယူလိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒီနောက်မှာတော့ ရွာသူားတွေ အတွက် ၀ိုင်း ၄၀ိုင်းစီစဉ်ထားပါတယ်။
ထိပ်ဆုံး(ဆုယူရမယ့်သူတွေရဲ့ ၀ိုင်းနဲ့ မျက်စောင်းထိုးကလေး၊မျက်လုံးကလေး စွေလိုက်ရုံနဲ့ မြင်ရမယ့် အနေအထားမှာ)ရွာသူ အပျိုချော ကွမ်းတောင်ကိုင် ပန်းတောင်ကိုင်ကလေးတွေပါ။
ပန်းရောင်ဇာအကျီင်္နဲ့ လှနေတဲ့ မအိရဲ့ `ကောင်မလေးတွေ ကပ်ကျေး အသင့်´ဆိုတဲ့ကွန်ထရိုးအောက်မှာ
MG မောင့်ကို တစ်နေ့မတွေ့ရရင် မနေနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ ရွာသူ ဂျူးဂျူးမ၊
အပျိုကြီးလုပ်မှာဆိုတဲ့ အိတုံ၊ (အိညီအမ ၃ဖော်ပါ)
ဘယ်လိုတောင်းတောင်းမပေးဘူးဆိုတဲ့ Green Rose၊
လူချောင်းပွဲ …အဲမှားလို့ တွေ့ဆုံပွဲ အစဦးဆုံးစီစဉ်ခဲ့သူ Moonpoem
ကွန်မန့်လေးတွေ အပေးကောင်းတဲ့ TinTin ၊မျက်မှန်လေးနဲ့ ပြုံးပြုံးလေးနေတတ်တဲ့ ငြိမ်းငြိမ်း ၊
အာဂရဲ့ ညီမလေး နွယ်ပင် တို့ နေရာယူထားကြပါတယ်။
(ကပ်ကျေးတွေကတော့ စလင်းဘက်ထဲဆိုတော့ မမြင်ရပါဘူး)
ဦးကျောက်ကတော့ အဲဒီဝိုင်းနားသွားရဖို့ အခွင့်အရေးချောင်းနေတာ အနားက ဦးကြီးမိုက်က ဆုယူဖို့ လွတ်သွားပါမယ်ကွာ ဆိုပြီး ဆွဲထားရပါတယ်။
အဲဒီဝိုင်းဘေးမှာတော့ Dr.AKKO ၊ဦးမင်းအဏ္ဏ၀ါ ၊Cobra၊ မင်းသုဝေ၊ရွာစားကျော်၊P Chogyi ၊ဦးမာဃ၊ကိုသွင်ဇေယျာမျိုး၊အံစာတုံး၊ကမ်းဝေး၊Fatty Cat တို့စုံတွဲ ထိုင်ကြပါတယ်။
အလယ်တည့်တည့်မှာတော့ ကင်မလာကြီးတွေနဲ့ လုလင်နဲ့ ဆရာအုပ်က အပီအပြင်နေရာယူပြီးဖြစ်ပါတယ်။
တတိယ၀ိုင်းမှာတော့ ဗလာမပါ ကံစမ်းမဲ အလှူရှင် ရွာရဲ့ အလှပဂေး မနိုဗွီ နဲ့ အုပ်ထိန်းသူ ဂျူနိုလေး၊
တိုက်တိုက်ရဲ့ အုပ်ထိန်းသူ စိမ်းမမစိမ်း၊
လူငယ်သလောက် စကားလုံးတွေ ပြောင်မြောက်တဲ့ လုံမလေးမွန်မွန်၊
သူ့ရဲ့ ချစ်သူငယ်ချင်း သျှားသက်မန် (သူတို့လေးတွေ နှစ်ယောက်က ရုပ်ကလေးလည်းဆင်၊နာမည်ရင်းလည်းတူ၊လက်စွမ်းထက်ပုံချင်းလည်းတူ၊အလုပ်ကလည်း တူ ဆိုတော့ တကယ့် အမွှာညီအမပါပဲ)
ကျမတို့ အမွှာညီအမလို တစ်ဖက်လိုက်မနေပါဘူး။
မျက်မှန်လေးနဲ့ လှနေတဲ့ မယ်စကြ၀ဠာဆိုက် ပန်ပန်ချစ်၊
Net Guide Journal ရဲ့ ပင်တိုင် ကလောင်ရှင် သူရဿဝါ၊
ဆန်ခါတင်ထဲ မကြာမကြာပါတဲ့ ရင်နင့်အောင် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
စတုတ္ထ၀ိုင်းကတော့ ရွာတော်ရှင်ဆူး၊အီးဇီးကွတ် ဝေေ၀၊ ရောင်းလက်စ ဂျလေဘီ ဗန်း ခဏသိမ်းလာတဲ့ ကိုဆာမိ၊
Water Follow Fish Follow အော်မှားလို့ Water Polo နဲ့ Water Fish တို့ဖြစ်ပါတယ်။
လူတွေစုံပြီဆိုတော့ အစီအစဉ်ကို အခမ်းအနားမှူး ရွှေတိုက်စိုးက ကြေငြာပါတယ်။
(မမက အနောင်စာလုပ်ဖို့ ဆံပင်တောင်ကောက်ထားရတာကို မသိချင်ထောင်ထောင်ပြီး
အန်တီမမခါးနာနေပါတယ် အကြောင်းပြပြီး မိုက်ခဲကြီး ရွှေတိုက် မိုက်ကို မလွှတ်ကြောင်း
ဆုံးမသည့်အနေဖြင့် နှစ်နာရီတိတိ တရားထိုင်ခိုင်းရင်း ဒဏ်ခတ်ပေးပါရန်
အုပ်အုပ်သို့ ဤနေရာမှ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရင်း ခဏနားပါရစေ)
မန်ဘာအကုန်ကို သိနေ အမှတ်တရရှိနေပြီး ၊
ဒေါင့်စေ့အောင်မြင်တတ် – သူများမျက်စေ့ထဲ ထင်မြင်လာအောင်ရေးတတ်တာ..။
ဒါကြောင့် အခန်းအနားပိုစ့်တင်ပေးဖို့ တတွတ်တွတ်ပူဆာထားရတာ….
ရွာသူားများ ကျုပ်-ဦးပါ ကို ကျေးဇူးတင်ကြပါ…
ဒါကြောင့် ငှက်ကထကြီးဖြစ်နေတာလေ ..ဘယ်သူကို ဘယ်နေရာမှာသုံးရမယ်ဆိုတာလည်း သိပါ့ ။။
ဒါပေမဲ့ ဒါပေမဲ့… ငှက်ကထကြီးရဲ့ လက်ရာက်ို ဒီလ ဆု ကြေညာတဲ့ ပိုစ်မှာ မြင်ရမှာမို့လား ဟင်င်င်င်… :harr:
https://myanmargazette.net/164389 ရွာသူ/ရွာသား တွေရဲ့ မိတ်ဆက်စကား- ဂန္ဓာရီ ဆြာအုပ်
နဲ့ ဆက်ပြီး ဖတ်ကြစေလိုပါတယ်။(ဟိဟိ အကွက်မြင်လို့ အချောင်ခိုလိုက်ပြီ)
အော်..အဲဒါကြောင့် ကျမရဲ့ မိတ်ဆက်စကားမှာပြောခဲ့ပါတယ်။
ကျမကို ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဥက္ကဋ္ဌကြီးနဲ့ မြှောက်မြှောက်ပြီး သူတို့ခိုင်းတာလုပ်နေရတာပါလို့။
ကျမ အဖီလေးကနေ ခေါင်းနဲ့ ဆင်းရရင်တော့ ဦးပါနဲ့ ရွှေတိုက်ကြောင့်ပဲ။
မနက်ဖြန်က.. အိုဘားမားဒုတိယသက်တမ်း ကျမ်းကျိန်ပွဲရှိတာမို့.. ဒီနေ့တနေ့လုံးက.. ၀ါရှင်တန်မှာ အင်မတန်အလုပ်များတဲ့နေပေါ့..
ပထမမန်းဂဇက်ကွန်ဖရဲင့်စ်နဲ့.. အမှတ်တရ.. :harr:
ဒါကြောင့် “အိုဘားမား” စာရင်းပေးပြီး မတက်ဖြစ်တာကိုး။
သူတို့ကြောင့်သာ အဘ ၊ ဦးပါ ၊ မပဒုမ္မာ တို့ လူ သိပ် မပင်ပန်းခဲ့ရပါဘူး ။
ဓတ်ပုံတွေ မပါသေးပေမဲ့  တကယ်ပဲ အသက်ဝင်လှပါတယ်
တချို့ ဝိုင်းတွေက သူတွေကို သေသေချာချာ မတွေ့ ခဲ့ ရတာ အခုတော့ 
အစ်မပဒုမ္မာ မှတ်သားရေးပေးလို့သိရပါကြောင်း
ကျေးကျေးပါဗျာ ။ဒီနေ့ ဖတ်ရပေမဲ့မနေ့ ကကိုပြန်ရောက်သွားပါတယ်…….။
သူကြီးကို အန်တီပဒုမ္မာကိုတော့ တစ်နေ့ နှစ်ပုဒ် ခြွင်းချက် ပေးပါလို့တောင်းဆိုရမယ် ထင်တယ် ….
ကိုယ်တိုင် တက်ရသလို မျက်လုံးထဲ ကို မြင်လာတယ်
စီစဉ်သူ တက်သူ ရေးသူ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အန်တီ ပဒုမ္မာ သိမှာပါ ကျွန်တော် မိတ်ဆက်စကားပြောတော့ လူကြီးတွေများလို့ နည်းနည်းရှိန်နေတော့ လိုတိုရှင်းပြောလိုက်ရတာ အမှန်တကယ်က စိတ်ထဲမှာပြောဖို့စဉ်းစားထားတဲ့စကားတွေကအများကြီး။
နောက်တစ်ခါတွေ့ဆုံပွဲကြရင် အဲလိုမဖြစ်ပဲ ပြောရဲဆိုရဲ ရှိအောင် ကွမ်းစားပြီးပြောရင်ကောင်းမလား ။ ဒါမှမဟုတ် အဲဒီ မိုက်တွေ ဆောင်းဘောက်တွေ ကိုအိမ်သယ်သွားပြီး နောက်တစ်ခေါက်ပွဲအတွက်လေ့ကျင့်ရင်ကောင်းမလား လို့စဉ်းစားနေတာ ။
ဟားးးး အကြံတူနေပီ ကိုသုဝေရေ ..
ဂျူးမက မိုက် ကြောက်တဲ့ရောဂါရှိတယ် …
မနေ့ကတောင် တော်တော်အားတင်းပြီးပြောလိုက်ရတာ …
နောက်တွေ့ဆုံပွဲတွေအတွက် အိမ်မှာ မိုက်နဲ့ပြောရဲအောင် ကျင့်ရင်ကောင်းမလားစဉ်းစားနေမိတယ်..
အန်တီပဒုမ္မာ က ရေးတတ်ချက်တော်……..
P3 ကို ရောက်သွားသလိုပါဘဲ…
မျက်စိမရှင်၊ နားထိုင်းပြီး စိတ်နဲ့ မှတ်ပြီး ပြန်ရေးရတဲ့ လက်နှေးတဲ့ အဖွားကြီးဖြစ်ပေ လို့ သာပဲ နော်။ စေ့စေ့ စပ်စပ် နဲ့မန်ဘာအားလုံး ကိုပုံ ပန်း သွင်ပြင် နဲ့ ၊ ထိုင်တဲ့ နေရာက အစ သေချာ မှတ် ထား နိုင်တဲ့ အန်တီ့ မှတ်ညဏ် ကတော့ တကယ်အား ကျစရာပဲ။ ကျမ သာ အန်တီ့ အရွယ် ဆို အဲလောက် မှတ်မိ ပါ့ မလား မသိဘူး။
မရောက်ခဲ့ရပေမဲ့ ပွဲအလယ်ရောက်နေသလို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်အောင် ရေးတတ်လိုက်တာ မပဒုမ္မာရယ်…
တိုတောင်း လှတဲ့ အချိန် အတွင်းမှာ မဆုံတွေ့တာ ကြာတဲ့ မိတ်ဆွေ တွေကို နှုတ်ဆက်ဖို့ ရီပြပြီး စကားတောင် သေချာ မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။
အချိန်တွေရယ် ကုန်မြန်လွန်းလှပါတယ်.. နောက်တခါ အချိန်ပိုများများ လုပ်ဖို့ လိုမယ် ထင်တယ်.. ဟိဟိ
ပျော်ခဲ့ပါတယ်.. ပွဲစီစဉ်သူတွေကော ပွဲတက်ရောက်သူတွေ အားလုံးကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဆယ်နာရီခွဲလောက်မှာ မပြောမဆို လစ်ထွက်လာမိတာ
စိတ်ထဲမကောင်းဝူးဖစ်နေတာရှင့်။ ညီအမလိုချစ်ရတဲ့ သယ်ရင်းရဲ့ မင်ဂါဆောင်ကိုကလဲ
နောက်ပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုတော့ အန်ကယ်ဒုံရဲ့ ကွန်ဖရင့်စ်မှာဘဲ ဆက်လက်
တား နည်းနည်းလေးနောက်ကျတာပါ…….. ဟီးးးး
အန်တီ ပဒုံမာ က အပျိုကြီးဆိုတာ တားတား ပြောလိုက်မိတယ်နော်..။ အဲဒါ သား ပြောတာ မဟုတ်ဘူး အဘဖောပြောခိုင်းလို့ပြောလိုက်တာ နော်..။ ကဲ အဘဖောရေ ဆက်ရှင်းပေတော့.. ဟိ ဟိ ..လွန်တာရှိ ၀န်တာမိပါနော့်..။
အန်တီပဒုမ္မာရေ တစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းဖတ်ပြီးမန့်လိုက်တယ်နော် အခုလိုလေးဖတ်ချင်တာ ဘယ်သူများပြောပြမလဲမျှော်နေရတာ ဖေ့ဘွတ်မှာတွေ့သမျှလိုက်မေးနေတာ။ အခုတော့ဘ၀င်ကျသွားပြီမို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။ အတွေးနဲ့ပဲပျော်လိုက်ပါမယ်။
နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ဆုံကြသလိုပဲနော်… မျက်လုံးထဲ ပြန်မြင်နေတယ်…
ဦးမာဃက မနိုဗွီတို့ ဝိုင်းမှာဗျ
ဦးမာဃ ညိုချောလေးကို နတ်ဝတ်တန်ဆာတွေ မပါတော့ မျက်စိ ခလုပ်တိုက်သွားတာပါတော်၊ခွေးလွှတ်ပါ။
လာမယ့်နှစ် ပွဲတော်ကိုတော့ နွှဲပျော်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါမည်။
အဲလိုမျိုးဖြစ်အောင်တော်တော်ကြိုးစားလိုက်ရတယ် .. :har:
မစ္စတာအာဂက မိတ်ဆက်သူတွေကို လူပျိုပါ အပျိုပါလို့ ဘေးက တစ်လျှောက်လုံး ထိုင်အော်ပေးနေတာ။
နွယ်ပင်အလှည့်ကျတော့ ဘေးက လူတွေက အာဂညီမလေး လို့ ပြောကြလို့ သူ့ကိုယ်သူလည်း လူပျိုကြီးလိုလို ဘာလိုလို လုပ်နေတာ….
နွယ်ပင်က အပျိုမဟုတ်ပါဘူး။ အာဂ မိန်းမ ပါလို့ ပြောလိုက်လို့ ကျွတ်ဆင်ဖြစ်သွားတယ်။ :harr:
တစ်ယောက်ချင်းစီကို မမ တို့ မြ၀တီက လိုက်ဗျူးတော့ ဆြာအုပ်က လူပျိုတော့ မဟုတ်ပါဘူး လို့ ၀န်ခံသွားပါတယ်။
အိမ်သူက အစက လိုက်မလို့ပါပဲ တဲ့။
ဒီပုံစံနဲ့ဆို မလိုက်ဘူးလို့ ပြောပြီး ကျန်နေခဲ့တာတဲ့။
စာအုပ်ရဲ့ မိန်းမကို ခေါ်မလာချင်လို့ လုပ်တဲ့ အကြံအဖန်နဲ့ ဆင်ကွက်လေး နှောင်းလူတွေ အတုယူ လိုက်နာနိုင်ဖို့ ဖော်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်။
(ချစ်တူမလေး နွယ်ပင်အတွက် အာဂ မပါ။)
အန်တီပဒုမ္မာရေ………. တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ပုံစံကို သေချာပုံဖော်ပေးထားတာ အပြင်မှာမြင်တွေ့နေရသလိုပဲ………….. မှတ်ဥာဏ်ကောင်းချက်ကတော့နော်…………….